Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaadyo ka socda Adisababa iyo Cabdi iley oo sheegay inuu 250 wadaad u diri doono Maqale
Mudaaharaadyo ka socda Adisababa iyo Cabdi iley oo sheegay inuu 250 wadaad u diri doono Maqale
Musliminta Itoobiya oo lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 60% ayay xukuumadihii isaga dambeeyay Itobiya gaar ahaan xukuumadda TPLF aad u duudsiyaan xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda. Inkastoo shacabka Itobiya uu ka mid yahay kuwa ugu ayaanka daran shucuubta caalamka, hadana bulshada muslimiinta ah ayaa kolba xukuumadda joogta ula dhaqantaa hab ka duwan siday ula dhaqmaan kaniisadda Orthodox-ka ay xukunka Itobiya uu ku tiirsan yahay.
Xukuumadda Wayaanaha ee TPLF ayaa waayadan dambe bilawday arima u muuqda inay doonayaan inay ku kiciyaan muslimiinta taasoo ay ka leeyihiin ujeedooyin farabadan. Waxaan horey uga akhrinay shabakadaha u hadla kaniisadaha caalamka in Itobiya kaniisado ku yaala gobolka Oromada la yidhi waxaa gubay dhalinyaro muslimiin ah oo ku dhawaaqaya –Alaahu Akbar -. Waxaana soo baxday inay arimahaasi ka dambeeyeen sirdoonka Wayaanaha oo doonahayay inay hal dhagax laba shimbirood ku dilaan. Inay Oramada iyo Amxaarada iska horkeenaan, isla marahaantaana caalamka masiixiga ay kaga helaan dhaga nugayl iyo inay xukuumadda TPLF-tu tahay midda kali ah ee difaaci karta danaha dadka masiixiga ah.
Waxyaabaha dalkeena horey u soo maray waxaa ka mid ah in biloowgii 1997 ay dugsiyada sare geeyeen kutub taarikhada (History Books) laga barto oo lagu aflagadeyey Nabi Mohamed SWC oo waliba jaldiga kore ee buuga lagu soo sawiray muuqaal ay leeyahiin waa Nabi Mohamed CS oo u dhintay malaariyo iyo halku dhagayo aad uga xanaajiyey Arday da Ogadeniya iyo guud ahaan muslimiinta. Waxay ardaydii dhigeen mudaharaad balaadhan oo ka dhacay meela badan oo Itobiya ka mid ah oo muslimiinta gaar ahaan ardayda ay wadeen. Waxaa magalada lagu arkayey maydadka Ardayda oo gaadhaya 8 ugu yaraan.
Arimaha hadda ka socda Addisababa iyo guud ahaan gayiga Oromada ee looga soo horjeedo isku dayga Xukuumadda TPLF ee ah inay dadka muslimiinta ah ku qasabto inay qaataan madhabka Shiicada ayaa muslimiinta guud ahaan ka wada cadhaysiiyay, waxayna u badan tahay inay la gadoomi doonto xukuumadda Wayaanaha oo ah kuwa keenay dalka kooxdan Axbaashta ah.
Cabi Iley ayaa isaga habeen dhaweyd kaga hadlay TV-Cakaaro inuu 250 wadaada oo Somali ah u diri doono masaajid ku yaala magaalada Maqale si loo soo barro wuxuu ku tilmaamay diinta islaamka. Way iska cadahay in amarkaa la soo siiyay oo arintan ay ka dambeeyaan Wayaanaha, waxaana la doonayaa in wadaado laga soo ururiyay dadka muslimiinta ah loogu soo xareeyo Axbaashta halkaa si loo qabadsiiyo madhabka ay wataan ee Shiicada ah.
raad raac says:
asc dhammaan bulshada soomalida Ogadeniya waxaan idiinku bishaaraynayaa inuu soo dhawaaday nasrigii ilaahay aan ka sugaynay ee bulshooy, bulshooy waxaa iga dardaarana aan xuduuda heena xidhano halganka maanta ah hadaan ka faa,iidaysan weyno waxay ila tahay jaanis dambe oo aan halgan ku iclaaminaa inuusan macquul ayahyn allaahu akbar Ogadeniya ha xorowdo viva madaxda jwxo xafidahu laahu admiraal maxamed cumar cismaan